Home News Masuuliyiinta Galmudug oo laga Mamnuucay in Ku shiraan Magaalada Cadaado!!
Masuuliyiinta Galmudug oo laga Mamnuucay in Ku shiraan Magaalada Cadaado!!
Wararka aynu ka heleeyno Magalada Cadaado ee Gobolka Galgaduud ayaa kusoo waramayaa in Amar Maanta ka soo baxay Maamulka Magaaladaasi lagu mamnuucay in shirar Siyaasadeed lagu qabto Magaladaas.
Guddoomiyaha degmada Cadaado ee uu dhawaan Magacaabay Madaxweyne Xaaf Cabdi Kariin Maxamed Cilmi ayaa faray qeybaha kala duwan ee Bulshada Cadaado iyo Hay’adaha amniga in Magalada aan lagu qaban karin shirar Siyaasadeed oo aan fasax looga heysan Maamulka.
Waxa uu sidoo kale sheegay in cidii Magalada Cadaado iyo deegaanada hoostaga ku qabata shirar uusan Maamulka ogeyn in ay qaadi doonto masuuliyadda Khasaarihii ka dhasha.
Previous articleMuqtaar Rooboow oo ka digay in Doorashada K/Galbeed dib loo dhigo!!
Next articleXildhibaan Cabdishakuur Cali Mire oo lagu heley kiis halis ah.
Wasiir Cabdixakim: Hoowsha Hajka waxaa hortaagan qaar ka mida Golaha Wasiiraada!...